टि ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी बजाज युथ बिसनपुरद्वारा कब्जा | My Sanchar
राजविराज – चाम्पियन स्टार क्रिकेट टिमद्वारा सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका ५ जाँजरमा सञ्चालित टि ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी बजाज युथ एकेडेमी बिसनपुरले कब्जा गरेको छ ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलवार सम्पन्न फाईनल खेलमा बैरियालाई ४ रनको अन्तरले पराजित गर्दै बिसनपुरले उपाधीमाथि कब्जा गरेको हो । प्रतियोगिताको उपाधीसँगै बिसनपुरले नगद रु. ५० हजार तथा कप प्राप्त गरेका छन् भने उपबिजेता बैरियाले नगद रु. ३० हजार तथा मेडलमा चित बुझाएका छन् ।
टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बिसनपुरले १८ ओभर ३ बलमा अलआउट हुँदै १०२ रनको योगफल बनाएको थियो । जसमा बिरबलले २३ रन, बिबेक यादवले १३, राकेश ११ तथा बिकास दास (पोलार्ड) ले १० रनको योगदान गरेका थिए । बैरियाका दिब्यान्सु मल्लिक र अकरम अलीले समान ३÷३ बिकेट, आकाशले २ तथा रबिन्द्र र राजेशले समान १÷१ बिकेट हात पारेको थियो ।
प्रतिउत्तरमा १०३ रनको बिजयी लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको बैरिया १७ ओभर ४ बलमा अलआउट हुँदै ९८ रनमा समेटियो । उसका राजेशले ४० तथा रंजितले १८ रन बनाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याटस म्यानले दोहोरो अंक जोड्न नसक्दाँ बैरिया हार बेहोर्न बाध्य भयो ।
खेलको म्यान अफ द म्याच बिसनपुरका बिबेक यादव घोषित भए । प्रतियोगितामा म्यान अफ द सिरीज तथा बेष्ट ब्याटसम्यान भएका बैरिया टीमका बिशालले मेडलसहित एक थान साईकल पाएको छ । त्यस्तै प्रतियोगितामा बिसनपुरका रोबिन सिंह उत्कृष्ट बलर घोषित भएका छन् । प्रतियोगिता पश्चात आयोजित पुरस्कार बितरण कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य अभिषेक कुमार यादव, नेकपाका नेता दिलिप यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे बर्साइनका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रदीप सिंह लगायतले बिजेता तथा उपबिजेता टीमलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र बितरण गर्नुभयो ।
यसअघि मंगलवारै बिहान भएको खडक नगरपालिका र सुरुङ्गा नगरपालिकाको महिला क्रिकेट टीमको बीचको मैत्रिपुर्ण क्रिकेट प्रतियोगितामा खडक नगरपालिकाको महिला टिम बिजयी भएको छ ।
Previous : राजगढमा ३६ करोड ६३ लाखको अनुमानित बजेट सार्वजानिक
Next : महोत्तरीमा थप ६२ स्वास्थ्यचौकी स्थापना हुँदै